EA Sports UFC, manadihady ny lalao ady tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Alfonso de Frutos | | Lalao Android, hevitra
EA dia manam-pahaizana amin'ny simulator ara-panatanjahantena. ny franchise fanta-daza FIFA, iray amin'ireo tombony be indrindra amin'ny orinasa, dia ohatra iray mazava amin'izany. Ary raha mahafantatra zavatra ny ekipa EA dia ny mamelona indray ny fanatanjahan-tena avy amin'ny studio hafa, manome azy ireo mikasika azy ireo hahomby amin'ny asany indray. Y EA Sports UFC dia ohatra mazava amin'izany.
Ny UFC, na Ultimate Fighting Championship dia lamaody ankehitriny. Manana mpiady espaniola aza isika amin'ny fifaninanana haiady mahery vaika mifangaro eto amin'izao tontolo izao! Noho izany, anio no itondrako anao a famerenana horonantsary feno an'ny EA Sports UFC ho an'ny Android, lalao izay hahagaga anao noho ny kalitaon'ny sary sy ny zava-misy tsy ampoizina.
1 EA Sports UFC no manana mpiady tsara indrindra amin'ity tompon-daka ity
2 Lalao feno mamerina amin'ny laoniny ny adin'ny UFC
3 EA Sports UFC dia mampianatra anao ny fomba filalaovana tsikelikely amin'ny fampianarana tsotra
4 EA Sports UFC dia manana maodin-dalao izay manitatra ny androm-piainan'ny lalao
4.1 Sintomy ny EA Sports UFC ho an'ny Android
EA Sports UFC no manana mpiady tsara indrindra amin'ity tompon-daka ity
Hanombohana EA Sports UFC dia nahazo alalana tamin'ny fomba ofisialy avy amin'ny UFC ka hanana ny tena anarany ny mpiady. Noho io antony io isika dia afaka hiady amin'ireo mpilalao manana ny toerany Caín Velásquez, Robbie Lawler, Conor McGregor ary na dia miaraka amin'ilay mpiady aza Ronda Rousey amin'ny Bantamweight. Izany dia efa nanampy teboka vitsivitsy.
Mazava ho azy, ny lalao miasa amin'ny a Rafitra Freemium Noho izany, na dia afaka milalao aza ianao nefa tsy mila mandoa vola euro, raha te hanafaka ireo mpiady rehetra ianao dia azo antoka fa hanoratanao paosy. Na dia, araka ny hitanao tao amin'ny fanadihadian-dahatsary EA Sports UFC aza dia tsy ilaina koa ny mankafy ity lalao ity.
Lalao feno mamerina amin'ny laoniny ny adin'ny UFC
Ny fahagagana lehibe voalohany azonao rehefa manandrana ny EA Sports UFC voalohany ianao dia miaraka amin'ny kalitao grika ny lalao. Manana haavo avo lenta ireo mpiady, mamantatra azy mora foana, ankoatry ny fananana fizika tena tsara, manome ireo mpihetsiketsika hetsika mihetsika sy tena misy.
Voafetra ihany ny feon-kira. Betsaka ny mozika tsy ao anaty lalao, fa tena mahery setra ny feon'ny kapoka, manome ny fahatsapana fa tena miady amin'ny octagon ianao. Ka io lafiny io dia tsy mahavariana, fa tsy ratsy toerana amin'ny lalao koa.
Ary io no be indrindra amin'ny fahamendrehana fanitrihana ataon'ny EA Sports UFC izay mitoetra ao amin'ny rafitry ny lalao hatramin'ny ny ady tafahoatra izay tanterahina amin'ity tompon-daka ity dia soloina tanteraka amin'ny lalao; Amin'izany fomba izany no hahafahantsika mamely amin'ny faritra rehetra amin'ny vatana, manao lakile, sempotra… raha fintinina, kofehy izay manome ny EA Sports UFC zava-misy tsy mampino. Mazava ho azy, tsy mety amin'ny mpijery rehetra izy io, satria hahita ra ianao ary handre taolana tapaka marobe.
EA Sports UFC dia mampianatra anao ny fomba filalaovana tsikelikely amin'ny fampianarana tsotra
Aza matahotra anefa fa ny làlan'ny fianarana ny lalao dia tsara loatra ka tsy hijerena kapoka ianao amin'ny fotoana voalohany idiranao amin'ny oktagon hiady. Amin'ny fotoana voalohany hanokafanao ny lalao dia hampodinana ho azy ny fampianarana izay hanazava tsikelikely ny fomba fanaovana ireo hetsika samihafa, ny fomba hividianana hetsika vaovao sy ny sisa, mamela anao hianatra ny hevitra fototra ilaina mba hahafahana milalao tsy misy olana.
Rehefa mandeha ny lalao dia havoaka izy ireo fomba lalao vaovao raha mahafeno andiana fepetra takiana isika, toy ny fanokafana ny lalao amin'ny dimy andro hafa na fandresena andiana ady amin'ny fomba iray.
EA Sports UFC dia manana maodin-dalao izay manitatra ny androm-piainan'ny lalao
Asongadino izany afaka mampiofana ny mpiady ato amintsika amin'ny gym koa isika hanatsarana ny fihetsik'izy ireo sy ny fahaizany, antsipiriany taktika izay mahatonga ity lalao ity hahafinaritra kokoa, izay ho ahy dia nanjary zava-dehibe amin'ny finday. Bebe kokoa raha raisintsika ny faharetan'ny EA Sports UFC ho an'ny Android, manana lalao efatra ny lalao:
Mifanatrika: Raha te hampihetsika ity maody ity dia tsy maintsy mamoaka mpiady amin'ny sokajy tsirairay isika (Bantamweight, Flyweight, Lightweight ary Middleweight). Raha vantany vao nanokatra ity maody ity isika dia afaka mifanatrika amin'ny ady samihafa izay tsy maintsy handresentsika. Arakaraka ny handresentsika ny tolona no ahazoantsika loka tsara kokoa.
Carrera: Ny fomba anombohan'ny lalao ho toy ny mahazatra. Amin'ity fomba ity dia hianarantsika tsikelikely ny mekanikan'ny EA Sports UFC ho an'ny Android, mandritra ny fizaranay mofomamy havia sy havanana ary hampiofana ilay mpiady anay. Amin'ny filalaovana an'ity maody ity dia hamarana ny Face to Face isika.
miseho; Ity maody ity dia navadika aorian'ny filalaovana maody kariera mandritra ny fotoana iray. Amin'ny maody fampirantiana dia afaka miatrika ireo mpiady tsara indrindra ao amin'ny UFC isika amin'ny octagon hahazoana vola madinika.
Hetsika mivantana: Ity safidy ity dia hahafaly ireo tia UFC. Ary ny lalao dia manolotra fisehoan-javatra amin'ny fotoana tena izy miorina amin'ny tena ady hitranga, ka ireo mpankafy ny haiady haiady dia hankafy azy toy ny olon-kafa.
Ary ho anao, Ahoana ny hevitrao momba ny EA Sports UFC ho an'ny Android?
Sintomy ny EA Sports UFC ho an'ny Android
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » EA Sports UFC, manadihady ny lalao ady tsara indrindra ho an'ny Android izahay
Paul lavadenz dia hoy izy:
Ity lalao ity dia azo lalaovina amin'ny namana amin'ny fotoana tena izy?
Mamaly an'i Paul lavadenz